Politika fiarovana fiainan'olona - Victor Mochere
Politika momba ny tsiambaratelo ho an'ny Victor Mochere
Victor Mochere mikatsaka ny hanaraka ny torolàlana momba ny fiainana manokana nasionaly, isam-paritra ary iraisam-pirenena. Ny mombamomba anao manokana ihany no hanangonanay anao miaraka amin'ny fahalalanao sy ny fanekenao taloha. Afaka miditra amin'ny pejin'ny tranokalanay ianao ary mijery ny tranokalanay nefa tsy manambara ny mombamomba anao manokana. Tsy hampiasainay afa-tsy ny mombamomba anao manokana ho an'ny tanjona nanangonana azy. Izahay dia miantoka fa ny mombamomba anao manokana dia tsy hambara amin'ny antoko hafa afa-tsy raha takian'ny lalàna na fitsipika hafa. Nametraka politika, fitsipika ary fepetra momba ny teknolojia sy fiarovana izahay mba hiarovana ny mombamomba anay izay eo ambany fifehezanay, avy amin'ny: fidirana tsy nahazoana alalana, fampiasana tsy mety, fanovana, fandravana tsy ara-dalàna na tsy nahy ary fahaverezana tsy nahy. Esorinay ao amin'ny rafitray ny mombamomba anay izay tsy ilàna azy intsony (afa-tsy izay ilaina ny fitehirizana).
Pejy fanangona antontan'isa momba ny statistika
Victor Mochere mampiasa rindrambaiko analyse web mba hanangonana antontan'isa momba ny fampiasana an'ity tranokala ity. Ity fampahalalana ity dia tsy ampiasaina hamantarana anao na hampifanaraka ny mombamomba anao amin'ny mombamomba anao manokana.
Ity politikan'ny fiainana manokana ity dia tsy miitatra mihoatra ity tranokala ity. Rehefa mifandray amin'ny tranokala hafa avy amin'ity tranokala ity, Victor Mochere Manoro hevitra anao hamaky ny politikan'ny tsiambaratelon'ireo tranonkala ireo ianao mba hahafantaranao ny fitsipiky ny fiainana manokana.
Amin'ny fampiasana ny Victor MochereNy tranokalan'ny, dia manaiky an'ity politika ity ianao ary manaiky ny fepetrany.